Barcelona siday ugu dhawaatay Mbappe, sheeko xiiso leh - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Barcelona siday ugu dhawaatay Mbappe, sheeko xiiso leh
Wakiilka Kylian Mbappe ayaa shaaca ka qaaday in weeraryahanka Paris Saint-Germain uu ku biiri lahaa Barcelona ka hor inta uusan lacag badan ugu dhaqaaqin PSG.
Mbappe, 22, wuxuu u dhaqaaqay Parc des Princes isagoo ka yimid Monaco xagaagii 2017.
Sanadkiisii ​​ugu horeeyay wuxuu amaah ku joogay kooxda ka hor inta uusan xiddiga heerka caalami ee dalka France qalinka ugu duugin heshiis joogto ah.
Parisiansku waxay bixiyeen € 145 million oo lagu daray million 35 million oo dheeri ah.
Xiddiga ku dhashay Paris ayaa dhaliyay 111 gool 153 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Wuxuu ku jiray qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa Talaadadii markii PSG ay 4-1 ku garaacday Barcelona meel ka baxsan gurigooda wareega 16ka Champions League.
Wuxuu dhaliyay seddexleey madaama wiilasha Mauricio Pochettino ay natiijo fiican soo heleen.
Lugta labaad waxaa loo qorsheeyay Arbacada, 10-ka Maarso, kooxda ka dheesha Ligue 1-na waa kuwa ugu cadcad inay soo baxaan.
Wakiilka ciyaaryahanka Junior Minguella ayaa sharaxaad ka bixiyay xaalada iyo sababta ay kooxda reer Spain u doorteen inaysan wax heshiis ah la gaarin Mbappe.
“Runtii waa run. Mbappe ayaa loo soo bandhigay Barcelona sanadkii 2017, ”ayuu u sheegay COPE. “Ma aheyn wax fudud sida ay umuuqatay arinta, waxay u doonayeen daqiiqadaas Neymar dartiis.
“Neymar qandaraas ayuu kula jiray kooxda, bixitaankiisana lama xaqiijin. Kooxda ma aysan dooneynin inay wax talaabo ah qaado ilaa uu Neymar ka tago.
Markii uu Neymar tagayo, waqtiga ay xaqiijinaya , asal ahaan kooxdu waxay shaki ka qabeen nooca ciyaaryahanka ee bedeli kara kara Neymar wxayna dorteen ugu dambeyn (Ousmane) Dembele. ”
Mbappe qandaraaska uu kula joogo PSG wuxuu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedka 2021-2022.
Liverpool iyo Real Madrid ayaa ah labada naadi oo wali lala xariirinayo ninka ku guuleystay Koobka Aduunka.
Laakiin imaatinka Thomas Tuchel ee Chelsea waxay sidookale macquul ka dhigeysaa inuu u dhaqaaqi karo galbeedka London.
Ninka reer Jarmal ayaa Mbappe kala soo shaqeeyay caasimada France waxaana la sheegay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay ciyaaryahanka.
Lama oga in Barca ay koofiyaddeeda u tuuri doonto saxiixaan laakiin Minguella ayaa soo jeedinaya in xiddiggu uu aad u xiiseynayay inuu u dhaqaaqo Barcelona.
Wuxuu intaas ku daray: “Kylian wuxuu doorbiday inuu yimaado Barcelona sababtoo ah waqtigaas, Neymar wuu baxay waxaana jiray fursad uu ka heli karay, Real Madrid-na waxaa joogay(Gareth) Bale, Cristiano (Ronaldo), (Karim) Benzema Ma jirin meel kaga fiican Barcelona.
Previous articleVan de Beek oo lasiiyay talo uu ku badbaadin karo mustaqbalkiisa
Next articleHowlgal laga sameeyay Jowhar & Taliska Booliska oo ka hadlay